Iingcebiso eziPhezulu zokuPhumelela kwiNtengiso yeStock | Ezezimali
Ngokuqinisekileyo enye yeminqweno yakho ekhawulezileyo kutyalo-mali kukuthenga izabelo kwizabelo ngeziqinisekiso ezithile zempumelelo. Ewe, ukuthengwa okuhle kwiimarike zesitokhwe linyathelo elibaluleke kakhulu eliza kukukhokelela ekuqinisekiseni ukuba iinzuzo ezinkulu azikude zize. Ngenxa yoku, kubalulekile ukuba uthathe uthotho lothintelo ngenjongo yokuba ukuthatha kakubi izikhundla kunokuthoba ubunzima kutyalo-mali oza kulukhulisa ukusukela ngoku.
Ngale ndlela, kunokwenzeka ukuba ngaphambili ukuthatha izikhundla Ngexabiso ufunda ubuchwephesha bayo kunye nenxalenye yesiseko. Awungekhe uyeke ukwenza eli nyathelo njengoko iziphumo zalo zinokubangela umonakalo kumgca wakho ongezantsi. Ngokukodwa, kuba uya kuba nethuba elikhulu lokukhula kokukhubazeka okunokuchaphazela iakhawunti yakho yokonga, ubuncinci kwixesha elifutshane. Le yimeko ekufuneka uyiphephe ngaphezulu kwazo zonke ezinye izinto eziqwalaselweyo.
Ewe kuyenzeka ukuba ungene kwifayile ye- uninzi lwamacandelo e-bullish Ngamaxesha onke ukwenza ipotifoliyo enamandla kunye nezinzileyo yezokhuseleko. Kwaye oko kunokuxhaswa ngezinye iinkcukacha ezisisiseko ezivela kwiinkampani. Lo ngumsebenzi ekufuneka uwenze ngaphambi kokwenza isigqibo malunga nokuba ungayibhekisa phi imali oyongayo ngelo xesha Ngaphandle kwezinye izinto zobuchwephesha kunye nezo sele kuxoxiwe ngazo kule bhlog.
1 Izikhokelo zokuthenga ngexabiso elifanelekileyo
2 Phambili kuhlahlelo lwamaxabiso
3 Izenzo ezingafanelekanga ukwenziwa
4 Thatha ithuba lokusikwa
Izikhokelo zokuthenga ngexabiso elifanelekileyo
Umtyalomali omncinci kufuneka aqhubeke nezikhokelo eziqinisekileyo zokuqhuba inkqubo yabo yokuthenga. Kule meko, ngothotho lweengcebiso ezinokuba luncedo kakhulu ngexesha elithile ebomini bakho. Umzekelo, ngala manyathelo alandelayo kwiimarike ze-equity:
Khetha amaxabiso akwi Intshukumo yokunyusa. Zezona ziqinisekiso zibalaseleyo ukuze kungabikho mpazamo kwisigqibo kwaye ukuba inokuba phantsi kwenani lokunyuka simahla, ke kungcono ngakumbi kwimidla yakho. Kuya kuba nzima ngakumbi kuwe ukuba ungafezekisi ezona njongo zakho uzinqwenelayo.
Ukuthenga amaxabiso asondele kubo amaxabiso enkxaso. Ukuzithengisa kamva kwindawo yokumelana, nangona kunjalo kwimeko apho izixhaso zaphulwe. Elinye lawona macebo alula asetyenziswa kwimarike yemasheya, nangona oku kubalulekile ukugcina ukubekwa kweliso kwangexesha kokuvela kwamaxabiso esitokhwe.
Amaxabiso athi baye babetha ezantsi: yenye yeemeko ezifanelekileyo kuye nawuphi na umtyali mali ekufuneka ajongane nokuthenga. Kodwa ngoncedo lokuba kunzima kakhulu ukufumana eyona ndawo apho la manqanaba akhiwa khona.
Ngenisa awona macandelo afanelekileyo: Le yenye indlela enomdla enokubheja kwizitokhwe ezidibanisa amacandelo kunye nokulindela okuhle kokukhula kwiinyanga ezizayo. Ngophononongo olubanzi olunokubakho kunakwamanye amacandelo emarike yemasheya.
Phambili kuhlahlelo lwamaxabiso
Ukufundisisa uhlalutyo lwakho lobuchwephesha kunye nesiseko sisicwangciso esiliqili sokungena kwiimarike zokulingana ngexabiso elifanelekileyo. Ukuya kwinqanaba lokuba ngumsebenzi onokukugcinela imali eninzi kulungelelwaniso kumaxabiso okuthenga kunye nokuthengisa ezabelo.
Kwelinye icala, khangela amaxabiso nge ephezulu ephezulu enokubakho Ihlala icetyiswa kakhulu kukhuseleko olunikezela kwimisebenzi yethu yentengiso yesitokhwe. Esi sicwangciso-qhinga siya kuba kukufumana ezo zikhuseleko zikude lee kwixabiso ekujoliswe kulo, kwaye ke, zinezinga elikhulu lokuxabisa. Ngeli xesha, unokufumana izinto ezidweliswe kwisaphulelo ukuya kuthi ga kwi-30% kwixabiso labo elinikezelwe ngabalamli bezemali.
Iingcebiso ezivela okanye abarhwebi: Abalamli bezezimali rhoqo setha amaxabiso afanelekileyo kunabanye ukwenza ukuthenga kwabo. Yindlela ebonisa ukuba ilandelwa ngokubanzi yinxalenye enkulu yabatyali mali, nangona kukho ingxaki yokuba ngamanye amaxesha uqikelelo alufezekiswa ngezizathu ezahlukeneyo.
Musa ukubeka emngciphekweni izigqibo. Izicwangciso zotyalo-mali ezikhuselekileyo zinokusetyenziswa kunezinye. Umzekelo, ukukhetha ezona stock zinolondolozo: azikho bhetyebhetye kakhulu, zithembekile, zizinzile kumaxabiso azo kwaye zihlawula izabelo ngonyaka. Ukukhethwa kwesi sicwangciso kuya kujolisa ekuthatheni izikhundla kwixesha eliphakathi okanye elide. Ngayiphi na imeko, ngekhe kwenziwe uqhaqho olwenziwa kwangolo suku lunye okanye nakwiiveki ezimbalwa okoko bafuna olunye unyango.
Hlaziya amaxabiso ngesiqhelo: ukubonisa ukuba lixesha elifanelekileyo lokutyala imali, ngekhe kube buhlungu ukuhlalutya imeko ngokubanzi yesalathiso apho siza kuthatha khona isikhundla, nokuba sesesizwe okanye esamazwe aphesheya. Iya kubonelela ngesiqinisekiso esikhulu kubhejo ngalunye lwentengiso, kunye nesixhobo somsebenzi esiluncedo kakhulu ukufikelela kwiinjongo zethu ezikhoyo. Ukuya kwinqanaba lokuba iya kuthintela izehlo kwipotfoliyo yethu yotyalo-mali ukusukela ngoko.
Izenzo ezingafanelekanga ukwenziwa
Ngokuchasene noko, kukho uthotho lwezikhokelo, ekuthe ngenxa yokusebenza kwazo okuthandabuzekayo, akufuneki zisetyenziswe xa kusenziwa utyalo-mali kwizabelo. Ingakumbi kuba ngaphandle kwamathandabuzo banokwenzakalisa abatyali mali abancinci nabaphakathi. Ke ngoko kuyacetyiswa ukuba ugcine ezi zenzo engqondweni ukuze ungangeni kuzo kwaye, hayi inokuyithathela ubunzima inzuzo yotyalo-mali lwethu. Iyakukhokelela ngokufanelekileyo kulondolozo kuzo zonke izikhundla ezithathwe ngabasebenzisi bemakethi yesitokhwe. Umzekelo, ngezi zenzo zilandelayo sikubhengeza ngezantsi.
Thenga ukuthengaOko kukuthi, khetha ukhuseleko ngaphandle komgaqo wobuchwephesha okanye osisiseko onalo ngelo xesha. Ikhokelela kwiimeko ezininzi kwiziphumo ezingafunekiyo.
Ngaba ulungelelwaniso lokuvula izikhundla kukhuseleko kunye amandla aphezulu okuqikelela ngenkolelo engeyonyani yokuba kuya kubakho ukufumana inzuzo eyinkunzi ngokulula ngakumbi. Banobungozi obukhulu kwaye umtyali mali kufuneka abazi ubungozi abuzenzekelayo ngokubheja kubo.
Ngena kwimarike kumaxesha e-bearish apho ixabiso lokuthenga linokuthatha ixesha elide ukufikelela. Yinto ekuthiwa ngokungcolileyo "ibotshelelwe".
Khuthazwa ngu Iingcebiso ezingafunekiyo okanye amaqela anomdla anokuphazamisa umtyali mali kwiqhinga lakhe lokungena kwiimarike zesitokhwe.
Thatha indawo xa ukhuseleko sele luziqonde ngokupheleleyo Inkqubo yokwazisaNjengokuphela kwento eseleyo kukubuyela kwizikhundla zokuthengisa emva kokubonga ixesha elingaphezulu okanye elingaphantsi.
Ukutyala imali kwizitokhwe ezikwinkqubo ye-bearish ecacileyo, kunye nenkolelo yokuba ukuchacha kwakho kungekudala. Ngaphandle kokuba imarike ibonelele ngokucacileyo ngemiqondiso yokuthenga, kungcono uzinxweme kubo.
Kwaye, ukhathalelo olukhethekileyo kwixabiso lezinto yeentshukumo zenkampani, amarhe okanye utshintsho kubanini zabelo. Ayilolize, zibonakalisiwe kuba zinokuhlaziya kwiiseshoni zentengiso yesitokhwe, kodwa ukuwa kunokubhengezwa kwaye kwiiseshoni ezimbalwa zinokuhla ngamandla kwixabiso lazo. Olu didi lwezicwangciso-qhinga zotyalo-mali lujolise kubona batyalo-mali banamava abanamava xa betyala imali kweli nqanaba lokhuseleko. Phakathi kwezinye izizathu kuba bayayazi indlela abaziphethe ngayo.
Kwiindlela eziya phezulu, umthetho oqhelekileyo phakathi kwabatyali mali abanamava kukulinda ukusikwa kwamaxabiso ezinkampani ukungena kwimarike. ngamaxabiso aphantsi. Esi sicwangciso sixhaphakileyo kutyalo-mali singakhokelela kuhambo oluya phezulu ngexabiso kwaye, ke ngoko, amathuba amakhulu okuhlaziya.
Akunakulityalwa ukuba ukusikwa okuthe ngqo kwenzeka xa kukho ukudinwa okuthile kwiindawo zokuthenga kunye nentengiso ziqala ukudada, Oko kukuthi, xa kuthengiswa kakhulu. Akumangalisi ukuba uhlengahlengiso kumaxabiso luyafuneka ukuze uqhubeke nokunyuka kwawo. Ezi zikhefu ezinengqiqo kwelinye icala kwixabiso lesilinganiso sakho zinqweneleka kakhulu njengoko ikhuthaza ukuthengisa ukuba kuqale ukuvela. Zenzeka amatyeli aliqela ngexesha lenkqubo yokwenyusa, nkqu nabahlalutyi bemarike yemasheya bayichaza njenge "iintshukumo zentengiso esempilweni ngokupheleleyo”Esebenzela ii-indices, amacandelo okanye izitokhwe ukufumana amandla ngakumbi kwiiseshoni ezilandelayo zorhwebo.
Zilungele ngokukodwa abo batyalomali bajolise kwixesha elifutshane kwaye bafuna ukwenza okona kuhambayo kuphezulu kufunyanwa zizabelo. Esinye sezona sizathu sibalulekileyo kukuba kunokuba njalo unenani elikhulu lezabelo ngesixa esifanayo kutyalo-mali. Isenzo esonyuselwayo xa ukhuseleko luhambisa izabelo phakathi kwabanini zabelo kuba oko kuya kuthetha isibonelelo esikhulu kule ntlawulo yenziwa rhoqo.
Kwelinye icala, awungekhe ulibale ukuba esi sisicwangciso esinokuveliswa ukwenza ngokuthe ngcembe ibhegi yokonga ezinzileyo. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko. Ukuze injongo yokugqibela ifezekiswe, kukwenza ukuba utyalo-mali lube nenzuzo enkulu, yiyo loo nto konke konke kunjalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Iingcebiso ezilungileyo zokuthenga ngempumelelo kwimarike yemasheya